DEG-DEG: Jose Mourinho Oo Loo Magacaabay Tababaraha Koox Weyn, Sannadaha Uu Saxeexay Iyo Faahfaahinta - Laacib
HomeSerie ADEG-DEG: Jose Mourinho Oo Loo Magacaabay Tababaraha Koox Weyn, Sannadaha Uu Saxeexay Iyo Faahfaahinta
DEG-DEG: Jose Mourinho Oo Loo Magacaabay Tababaraha Koox Weyn, Sannadaha Uu Saxeexay Iyo Faahfaahinta
May 4, 2021 Abdiwahab Ahmed Serie A, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Tababaraha reer Portugal ee Jose Mourinho ayaa kusoo noqday shaqada macallinnimo laba toddobaad ka hor markii laga caydhiyey Tottenham Hotspur, waxaana uu hoggaamin doonaa mid ka mid ah naadiyada ugu waaweyn qaaradda Yurub.
Mourinho oo Tottenham ay shaqada ka caydhisay laba toddobaad ka hor kaddib 17 bilood oo uu kooxdaas laylinayay, ayaa waxa hadda loo magacaabay tababaraha kooxda kubadda cagta Roma ee ka dhisan waddanka Talyaaniga.
Kooxda kubadda cagta Roma ayaa maanta shaacisay in uu tababaraheeda Paulo Fonseca ka tegi doono dhamaadka xilli ciyaareedkan, waxaanay inyar kaddib xaqiijisay in uu beddeli doono Jose Mourinho oo u saxeexay heshiis saddex sannadood ah.
Mourinho ayaa kooxda la wareegi doona xagaaga isagoo hoggaamin doono xilli ciyaareedka cusub ee 2021-22, iyadoo uu ka horna soo dhamaysan doono tartanka Euro 2020 oo uu falanqeeye ka noqon doono isagoo u shaqaynaya warbaahinta TalkSPORT.
Jose Mourinho oo ay da’diisu tahay 58 jir ayaa waxa uu heshiiskan cusub dhigayaa in uu caasimadda Talyaaniga joogayo illaa sannadka 2024.
Horyaalka Talyaaniga ayaa uu Mourinho hore ugu soo qaatay laba sannadood oo uu guulo waaweyn ku gaadhay, waxaana muddadii u dhaxaysay 2008 illaa 2010 uu tababare u ahaa Inter Milan oo uu kula guuleystay horyaalka Serie A iyo tartanka Champions League, ka hor intii aanu isagu iskii isku casilin.
Mourinho oo ka hadlayay talkSPORT oo uu heshiis la shaqayn ah la galay toddobaadkii hore, ayaa waxa uu tilmaamay in ay degdeg ku noqonayso haddii uu tababarenimada kusoo laabto xilli ciyaareedka dambe, laakiin hadda hadalkaas ayaa meesha ka baxay, waxaana uu durba saxeexay heshiis cusub.